ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : နေရာတိုင်းမှာ အစိုးရလူတွေ ဒုက္ခတွေပေးနေကြပြီ
နေရာတိုင်းမှာ အစိုးရလူတွေ ဒုက္ခတွေပေးနေကြပြီ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် စဉ့်ကူးမြို့နယ် ခူလယ်အုပ်စု ရေမျက်ကျေးရွာမှ ရွာသူ / သားများ၏တောင်းဆိုချက် ၇ ချက်
၁ . ရွှေ့ပြောင်းစရိတ်လုံလောက်စွာပေးရန်
၂ . လုံလောက်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်းရှိသောနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်မြေနေရာချထားပေးရန်
၃. ဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုများအတွက်ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္မဏီများနှင့်အစိုးရမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန်
၄ . သစ်မာပင်ထောင်စိုက်ခင်းအကြောင်းပြ နေသောဦးလှမျိုးကျော်ဦးဆောင်သည့်ကုမ္မဏီ နှင့် သိဒ္ဒိအောင်ရွှေမိုး ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္မဏီများအားတားဆီးပိတ်ပင်ပေးရန်
၅ . သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သော သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများအားနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ လုပ်ဆောင်ခွင့်မပေးရန်
၆ . လူထုဖက်မှရပ်တည်မှုမရှိသော အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များအားဖယ်ရှားပေးရန်
၇ . သေဆုံးခဲ့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် မခိုင်စိုးဝါ အသက် ( 22နှစ် ) မောင်ပြည့်စုံဦး အသက် (2နှစ်) မရတနာစို အသက် ( 7နှစ် ) တို့သေဆုံးမှု အပေါ်တွင်လည်းကျန်ရစ်သူမိသားစုများအား စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရန်
( အသေးစိတ်သိနိုင်ရန်ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်များ 09259414306 / 09402740001 / 09259764450 / 09402734532 )